Hordhac: Aston Villa vs Manchester United - Guushii 300aad Oo Loo Diiwaangelinayo United, Inkaarta Haysata Gerrard, Coutinho Oo Jooga Iyo Wararkii U Dambeeyey - GOOL24.NET
Hordhac: Aston Villa vs Manchester United – Guushii 300aad Oo Loo Diiwaangelinayo United, Inkaarta Haysata Gerrard, Coutinho Oo Jooga Iyo Wararkii U Dambeeyey
Manchester United ayaa raadin doonta inay kusoo laabato jidka guusha horyaalka Premier League marka ay fiidka hore ee caawa garoonka Villa Park ugu tagaan Aston Villa.
Isniintii toddobaadkii hore ayay Manchester United 1-0 kusoo garaacday Aston Villa kulan ka tirsanaa tartanka FA Cup, waxaana caawiyey Scott McTominay oo u dhaliyey goolka madiga ah ee wareegga afraad usoo saaray.
Aston Villa oo bandhig fiican samaysay ciyaartaas, waxa halgan la galay David de Gea, hase yeeshee caawa oo garoonkooda la joogo ayuu Steven Gerrard u dagaallami doonaa sidii uu saddexda dhibcood uga qaadan lahaa Manchester United oo ciyaartii u dambaysay ee horyaalka ay soo gaadhay guul-darro 1-0 ay oo ay kala kulmeen Wolves.
Ciyaartoodii horyaalka ee horraantii xilli ciyaareedkan ee ka dhacday Old Trafford, Aston Villa ayaa soo gaadhay guul dhif ah oo ay kasoo heshay Manchester United iyadoo kusoo badisay 1-0, waxaana Ralf Rangnick laga doonayaa in uu ka dagaallamo in laba ciyaarood oo isku xiga oo horyaalka ah ay guul-darro soo gaadho.
Xaqiiqooyin muhiim ah
Aston Villa dhibaato ayaa ka haysata kulamada Manchester United ay iska hor yimaaddaan. 22 jeer oo ay garoonkeeda kusoo dhoweysay Red Devils ayaanay wax guul ah helin. 15 ayaY Manchester United guuleysatay, toddobana barbarro ayay galeen. Sidaas ayay 222 ciyaarood ay Aston Villa guulo la’aan kaga tahay Manchester United. Sannadkii 1995kii ayaa ugu dambaysay Aston Villa oo guul ka gaadha Manchester United oo ku sugan Villa Park.
Aston Villa ayaa raadinaysa in markii labaad ay xilli-ciyaareedkan ka badiso Manchester United. Haddii ay caawa suurtogeliso inay guuleysato, waxay u noqon doontaa markii ugu horreysay ee tan iyo sannadkii 1976kii ay laba ciyaarood oo horyaalka ah si xidhiidh ah uga badiso Manchester United.
Manchester United ayaa caawa noqon doonta kooxdii ugu horreysay ee 300 ciyaarood oo Premier League ah guuleysata. Waxay hore usoo badisay 299 kulan, caawa ayaanay buuxsan kartaa tiradaas oo aanay jirin koox kale oo uga horreysay. Naadiga kusoo xiga, waxay Manchester United dheer tahay 37 guulood.
Ciyaarta: Aston Villa vs Manchester United
Waqtiga: 8:30pm – Saacadda Geeska Afrika
Aston Villa waxa mar kale ka maqnaan doona Leon Bailey iyo Marvelous Nakamba oo dhaawac ah, halka xiddiga muhiimka ah ee John McGinn uu isaguna ganaaxan yahay.
Betrand Traoare iyo Trezeguet ayaa kaga maqan tartanka qaramada Afrika, sidoo kalena Ashley Young ayaa uu shaki ku jiraa inuu kooxdiisa hore waajihi doono.
Warka fiican ee ay taageereyaashuna sugayaan ayaa waxa uu yahay in Philippe Coutinho uu ciyaarta caawa diyaar u yahay, sidaas oo kalena waxa ah Lucas Digne. Steven Gerrard ayaa xaqiijiyey in labadan ciyaartoy ay diyaar u yihiin kulanka oo ay kusoo bilaaban karayaan.
Haddii uu Coutinho kusoo bilowdo, waxa suurtogal ah inuu kaydka u dhaco Danny Ings, halka maqnaanshaha McGinn ay albaabada u furayso khadka dhexe ee reer France ee Morgan Sanson oo ka garab ciyaari doona Douglas Luiz iyo Jacob Ramsey.
Manchester United waxa dib ugu soo laaban doona Cristiano Ronaldo oo ka maqnaa ciyaartii FA Cup iyo xiddigaha kale ee dhaawaca kasoo kabanaya ee Harry Maguire, Jadon Sancho, Diogo Dalot iyo Phil Jones.
Paul Pogba ayaa wali aan diyaar ahayn, sidoo kalena Luke Shaw iyo McTominay ayaa ganaax ku seegaya ciyaartan, halka Eric Bailly uu xulkiisa Ivory Coast kala qayb-gelayo koobka qaramada Afrika.
Nemanja Matic ayay u badan tahay inuu khadka dhexe kusoo bilowdo oo uu galo booska McTominay, halka Ronaldo uu isaguna afka hore ku saddexaynayo Edinson Cavani iyo Marcus Rashford.